Akụkọ - Ifufe ndị a n'okpuru radar ga-abawanye ngwaahịa UPS
The Motley Fool guzobere na 1993 site na nwanne Tom na David Gardner. Site na weebụsaịtị anyị, pọdkastị, akwụkwọ, ogidi akwụkwọ akụkọ, mmemme redio na ọrụ ntinye ego dị elu, anyị na-enyere nde mmadụ aka inweta nnwere onwe ego.
United Parcel Service (NYSE: UPS) nwere ebe ọzọ dị ịrịba ama, yana uru mba ụwa na-enweta ihe ndekọ dị elu, yana ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na mmụba ego. Agbanyeghị, n'ihi nchegbu gbasara ọdịda nke uru US na atụmanya nke oke uru uru na nkeji nke anọ, ngwaahịa ahụ ka dara 8.8% na Wednesde.
UPS's revenue oku jupụtara na nnukwu nsonaazụ na amụma maka mmụba ego ga-abịa n'ọdịnihu. Ka anyị leba anya na ọdịnaya dị na nọmba ndị a iji chọpụta ma Wall Street ere rere UPS na njehie na ihe ga-eme ka ọnụahịa ngwaahịa ahụ pụta n'ọdịnihu.
Yiri nkeji nke abụọ, e-commerce na obere na azụmaahịa azụmaahịa (SMB) chọrọ ka ebe obibi wee pụta, na-ebute UPS ndekọ ego. E jiri ya tụnyere nkeji nke atọ nke 2019, ego rịrị elu site na 15,9%, uru ọrụ gbanwere jiri 9.9% rịa elu, na ego agbanwetara na nke ọ bụla mụbara site na 10.1%. UPS na njem njem ala nke izu ụka jiri 161% mụbaa.
N'ime oria ojoo a, UPS's headline news bu oke na ebe obibi ya ka ndi mmadu zere ahia na mmadu ma chigharia na ndi na ere ahia n'igwe. UPS na-ebu amụma ugbu a na ahịa e-commerce ga-aza karịa 20% nke ire ere ahịa US na afọ a. Onye isi ọrụ UPS, Carol Tome kwuru, sị: “Ọbụna mgbe ọrịa ahụ gbasasịrị, anyị echeghị na ọnụọgụ ọnụọgụ e-commerce ga-ada, mana ọ bụghị naanị mkpọsa. Ndị ahịa n'akụkụ niile nke azụmahịa anyị na-agbanwe etu ha si azụ ahịa. ” . Echiche Tome na usoro e-commerce ga-aga n'ihu bụ nnukwu akụkọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Nke a gosiri na njikwa kwenyere na ụfọdụ omume nke ọrịa a abụghị naanị ihe mgbochi na-adịru nwa oge maka azụmahịa.
Otu n'ime uru kachasị aghụghọ na nkwụnye ego nke atọ nke UPS bụ mmụba nke ọnụọgụ SMBs. Na ụzọ kachasị ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ bụla, ahịa SMB mụbara site na 25,7%, nke nyere aka mee ka mbelata azụmaahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ belata. Na mkpokọta, olu SMB mụbara site na 18.7%, ogo uto kachasị elu na afọ 16.
Njikwa na-egosipụta akụkụ buru ibu nke uto SMB na Digital Access Program (DAP). DAP na-enye obere ụlọ ọrụ ohere ịmepụta akaụntụ UPS ma kesaa ọtụtụ uru ndị nnukwu ụgbọ mmiri na-enweta. UPS gbakwunyere ihe ndekọ 150,000 ọhụrụ DAP na nkeji nke atọ na akaụntụ 120,000 ọhụrụ na nkeji nke abụọ.
Ruo ugbu a, n'oge ọrịa a na-efe efe, UPS egosila na ire ụlọ obibi dị elu na nsonye nke obere na ụlọ ọrụ nwere ike imebi mbelata nke azụmahịa.
Ihe ọzọ zoro ezo nke ụlọ ọrụ na-akpọ nzụkọ ogbako bụ ọnọdụ nke azụmahịa ya. Thelọ ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ ụgbọ ala bụ naanị ngalaba azụmaahịa na-azụ ahịa (B2B) nkeji iri na ise a n'agbanyeghị na uto ezughi iji belata mmebi nke ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Nnukwu ụgbọ njem ahụ ejirila nwayọọ nwayọọ mee ka ọrụ nlekọta ahụike dị mkpa UPS Premier dị mma. Usoro ngwaahịa sara mbara nke UPS Premier na UPS Healthcare na-ekpuchi ngalaba ahịa niile nke UPS.
Dabere na mkpa nke ụlọ ọrụ ahụike bụ nhọrọ ebumpụta ụwa maka UPS, n'ihi na UPS agbasawanyela ala na ọrụ ikuku iji nweta nnukwu ụlọ obibi na nnweta SMB. Companylọ ọrụ ahụ mekwara ka o doo anya na ọ dị njikere ijikwa akụkụ logistist nke nkesa ọgwụ mgbochi COVID-19. CEO Tome kwuru ihe ndị a gbasara UPS Healthcare na ọrịa a na-efe efe:
[Ndị ọrụ ahụ ike na-akwado ọnwụnwa ahụike nke ọgwụ mgbochi COVID-19 na ọkwa niile. Ntinye aka na mbụ nyere anyị data bara uru na nghọta iji chepụta atụmatụ nkesa azụmahịa ma jikwaa lọjistik nke ngwaahịa ndị a dị mgbagwoju anya. Mgbe ọgwụ mgbochi COVID-19 pụtara, anyị nwere nnukwu ohere ma, n'ezoghị ọnụ, buru nnukwu ibu ọrụ nke ijere ụwa ozi. N'oge ahụ, netwọk anyị zuru ụwa ọnụ, ihe ngwọta oyi na ndị ọrụ anyị ga-adị njikere.
Dị ka ọdụdụ ndị ọzọ metụtara ọrịa na-efe efe, ọ dị mfe ikwu na ihe ịga nke ọma UPS na-adịbeghị anya na ihe ndị na-adịru nwa oge nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ laa ka ọrịa a na-efe. Agbanyeghị, njikwa UPS kwenyere na ịgbasa netwọkụ njem ya nwere ike iweta abamuru ogologo oge, ọkachasị mmụba nke azụmahịa e-commerce, ijikọ SMB n'ime ndị ahịa ya yana azụmaahịa ahụike na-echekwa oge, nke ga-aga n'ihu Na-egbo mkpa nke ụlọ ọrụ ahụike na afọ ole na ole sochirinụ.
N'otu oge ahụ, ọ bara uru ikwughachi na nsonaazụ nke atọ nke UPS dị mma mgbe ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị ọzọ nọ na nsogbu. UPS nso nso a rutere na nke ọhụrụ 52-izu, ma ọ daa kemgbe yana ahịa ndị ọzọ. N'ịtụle ire ere nke ngwaahịa, ikike ogologo oge na oke uru nke 2.6%, UPS ugbu a dị ka nhọrọ dị mma.